Uphengululo lweeMakethi zeHlabathi ngoMeyi 2022 Iinkonzo kunye neNkcitho engafunyanwanga -Funda urhwebo olu-2
Uphengululo lweeMakethe zeHlabathi Review
Iimakethi zeHlabathi liqonga lotyalo-mali eliphumelela amabhaso elenza ukuba abantu bafumane imbuyekezo engahambelaniyo ngokuthengisa kwizinyithi ezixabisekileyo kunye nezinto zexabiso ledijithali. Inkampani yaqalwa ngo-2003 njengomthengisi weentsimbi oxabisekileyo. Emva kweminyaka yokukhula kunye nokwamkelwa, inkampani itshintshe isicwangciso sayo sokubonelela ngeakhawunti ye-Intanethi yeArtificial Intelligence (AI). Ikongeze iiasethi zedijithali ezinjengeBitcoin kunye ne-Ethereum. Inkampani ilawula ngaphezulu kweedola ezingama-30 zezigidi kubatyali zimali zentengiso, abantu abanexabiso eliphezulu, kunye nabatyali mali bamaziko. Inabathengi abangaphezu kwama-50,000 kwihlabathi liphela.
Trading Platform Ukurhweba ngeSoftware
Inani leeasethi 350
Iindidi zeeasethi Izitye zexabiso kunye ne-cryptocurrensets
Izibonelelo kunye neNgxaki zeHlabathi
Phantse amashumi amabini eminyaka kwishishini lezemali.
Idibanisa zombini ubukrelekrele bokuzenzela kunye namandla abantu.
Akukho mali idipozithi kunye notsalo
Abaphathi bezithili abazinikeleyo kwiiAkhawunti zeNkulumbuso yeGolide.
Abathengi banokulandela umkhondo wentsebenzo.
Abaxhasi bagcina ubunini beakhawunti
Ayilawulwa, eyingozi kancinci.
Kuncinci okwaziwayo malunga nenkampani kunye nolawulo lwayo.
Uninzi lweenkcukacha ezikule ndawo azinakuqinisekiswa.
Akukho zixhobo zentengiso ziyafumaneka kwiwebhusayithi.
Akukho zixhobo zefowuni.
Iimakethi zeHlabathi azifani nabarhwebi bendabuko. Eyona mveliso iphambili yenkampani ziiakhawunti ezilawulwa yi-AI. Oku kuthetha ukuba ufaka imali kwaye ii-algorithms zenkampani ziya kwenza urhwebo kuwe. Iimveliso ezizithengisayo isilivere yegolide, i-cryptocurrencies , kunye nezinyithi ezingaqhelekanga ezifana zobhedu kunye ne-rhodium. Ngokuya kwiwebhusayithi yayo, inkampani ibanga ukuba unokuthengisa ezinye iimali kwiqonga layo. Nangona kunjalo, ukujonga ngokusondeleyo kwiphepha layo lokuthengisa kubonisa ukuba oku akulunganga. Endaweni yokuba inkampani ikuthumele kwi-HYCM, eneqonga lokuzimela elizimeleyo.
Isifundo: Ungabhalisa njani kwaye urhwebe ngeeMarike zehlabathi
Inkqubo yokubhalisa kwiiMakethe zeHlabathi ilula. Okokuqala, kucetyiswa ukuba uziqhelanise neqonga. Ndwendwela iwebhusayithi kwaye ufunde ulwazi oluninzi kangangoko unakho malunga nenkampani. Funda imigaqo kunye neemeko, eziza kukunceda uwazi amalungelo akho xa usebenzisa inkampani.
Emva kokuqhelana nenkampani, kuya kufuneka undwendwele eli phepha. Kuyacetyiswa ukuba ukhethe ukhetho lokuqala, apho wenza iakhawunti yeedemo yasimahla eyi- $ 2,500. Kuya kufuneka uthathe ixesha ngale demo akhawunti ukubona ukuba iqonga liqhuba njani.
Emva kokoneliseka yiakhawunti, kuya kufuneka ukhethe uhlobo lweakhawunti oyifunayo. Zimbini iintlobo zeakhawunti. Iakhawunti esemgangathweni inexabiso elincinci le-5,000 yeedola ngelixa i-akhawunti yenkulumbuso yegolide inebhalansi encinci ye- $ 25,000.
Emva kokukhetha iakhawunti, uya kucelwa ukuba unike idilesi ye-imeyile kunye negama lokugqitha. Oku kuya kukusa kwiphepha elilandelayo, apho uya kucelwa khona ngolwazi oluthe kratya. Olu lwazi ligama lakho olinikiweyo, igama losapho, idilesi, isixeko, ikhowudi yeposi, ubumi, umhla wokuzalwa, kunye nenombolo yefowuni. Uya kucelwa kwakhona ukuba ungenise ipasipoti yakho okanye isazisi sakho kunye netyala lakho. Ezi zisetyenziselwa iinjongo zokuqinisekisa. Uya kucelwa ukuba uphawule iibhokisi ezininzi. Esi sisikhanyeli, nokuba ufuna iakhawunti ye-islamic, nokuba unayo iMakethi yeHlabathi yokuthengisa ngokwakho, nokuba unomdla kwisaphulelo segolide nesilivere, kunye nokuqinisekiswa kwakho kwezinto ezimbini. Emva kwayo yonke le nto, uya kusiwa kwiakhawunti yakho yobuqu.
Njengazo zonke iiakhawunti zokurhweba, ukuqinisekiswa kubaluleke kakhulu kwaye kunyanzelekile. Isiqinisekiso sokuqala ekufuneka usenzile kukuqinisekisa idilesi ye-imeyile. Ukwenza oku ngokucofa ikhonkco elithunyelwa kwidilesi ye-imeyile emva kokwenza iakhawunti yakho. Inkampani iyakuqinisekisa nepasipoti yakho okanye ikhadi lokuchonga kunye nemali eyilwayo. Kananjalo kuya kufuneka ukuba ungenise ifoto yakho ehlaziyiweyo. Ukuba ungumtyali mali weziko, inkampani iya kufuna ezinye iindlela zokuqinisekisa. Isebenzisa iinkcukacha zomdibaniso ukuqinisekisa.
Iimakethi zeHlabathi zibonelela ngeendlela ezininzi zokufaka imali. Ungafaka kuphela ukuba uneakhawunti esebenzayo. Iindlela ezahlukeneyo onokuzifaka kwimali kukuhambisa ngocingo, i-Bitcoin, iBitcoin Cash, i-Ethereum, enye idiphozithi yokuGqithisela i-Cryptocurrency, iSkrill, iNeteller, iRipidPay, kunye neWebmoney. Zonke ezi zine-0% yemirhumo yedipozithi. Unako ukufaka imali usebenzisa iVisa kunye neMastercard kodwa oku kubiza iifizi zedipozithi ezi-7%. Iidiphozithi zeDijithali yemali zenziwa ngokuthumela i-crypto kwizipaji ezibonelelweyo.
Ungarhoxisa imali kwiakhawunti yakho usebenzisa iBitcoin, ukuGqithisela iBhanki kunye nekhadi leDebit. Akukho ntlawulo xa usebenzisa iBitcoin. Ukuhlawulwa kweBhanki kuhlawula i-35 yeedola ngelixa ugqithiselo lwekhadi kwi-2% yemirhumo yakho. Uyirhoxisa imali yakho ngokugcwalisa ifom eli phepha okanye ukuthumela umyalezo nge-imeyile ku [imeyile ikhuselwe] Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba unokurhoxisa imali kube kanye ngekota. Kwakhona, kuya kufuneka ukhuphe imali kwiakhawunti yakho. Inkampani iyakwenza oku ukuqinisekisa ukuba ihlala ihambelana nemigaqo ye-KYC kunye ne-AML.
Indlela yokuTyala imali
Zimbini iindlela zokutyala imali kwiimarike zehlabathi. Okokuqala, kukho Ukuthengisa ngokwakho iakhawunti. Le akhawunti ikuvumela ukuba urhwebe ngokuthe ngqo kwintengiso yemali. Kule nto, unokurhweba ngazo zonke iintlobo zeemali, ii-equities, ii-indices kunye nezinto zorhwebo. Nangona kunjalo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, iiMarket zeHlabathi aziboneleli ngale nkonzo. Endaweni yoko isebenza njengomthengisi ozisa i-HYCM, yona ebonelela ngeqonga. I-HYCM ilawulwa yiCySEC, FCA, kunye neCIMA.
Indlela yesibini, esisonka kunye nebhotolo yeeMakethi zeHlabathi kukwenza iakhawunti ephethwe. Iakhawunti ephethwe isebenza njengeehedge fund. Kule nto, inkampani iya kukuhlawulisa umrhumo we-1% yomlawuli kunye ne-20% yomrhumo wokukhuthaza. Intlawulo yenkuthazo ihlawuliswa kuzo zonke iingeniso eziyivelisayo. Ukwenza oku, kufuneka ukhethe kuphela uhlobo lweakhawunti oyifunayo kwaye ubeke imali. Unokubeka esweni urhwebo lwakho esiphelweni sakho.
Iqonga lokuThengisa iMarike yeHlabathi
Iimakethi zeHlabathi zibonelela ngeqonga elinye lokuthengisa. Eli liqonga le-MQL Copy Trader. Emva kokuba wenze iakhawunti, ideshibhodi iya kuba nenani lamawijethi. Kukho incwadi yoku-odola yorhwebo ebonisa ukuthengisa okuvulekileyo kunye nendlela abaqhuba ngayo. Kukho itshathi ephilayo. Le tshathi ibonelelwe yi-TradingView, sesinye sezixhobo zentengiso ezidumileyo kwihlabathi. Kukho ezinye izixhobo ezinikezelwa yi-TradingView kwideshibhodi. Njengomtyalo mali, le dashboard iya kusetyenziselwa ukujonga ukusebenza kwezorhwebo lwakho kwaye ujonge ibhalansi yakho.
Ulwazi lweeMakethe zeHlabathi
I-URL yeWebhusayithi: https://worldmarkets.com/
Iilwimi: IsiNgesi. Inkampani inikezela ngeNguqulelo kaGoogle
Iakhawunti yedemo: Ewe
Ukukhetha idiphozithi: Ukutshintshwa kweBhanki, iSkrill, iNeteller, iWebmoney, iMali ekhawulezileyo, amakhadi eDebit, kunye nee-cryptocurrensets.
Iinketho zokurhoxa: Ukutshintshwa kweBhanki, iBitcoin, amakhadi
Ummiselo kunye noKhuseleko
Ukhuseleko yenye yezona zinto zibalulekileyo abathengisi kunye nabatyali mali kufuneka bahlale benazo engqondweni. Iimakethi zeHlabathi azilawulwa nangowuphi na umlawuli ofana neCySEC, FCA, kunye neASIC. Nangona kunjalo, inkampani isebenzisa imigaqo yabarhwebi eyisebenzisayo. Kule meko, inkampani isebenzisa imigaqo ye-HYCM, ngumbutho olawulwa ngokupheleleyo. Ke ngoko, xa ufaka imali, uyagutyungelwa yimigaqo ye-HYCM. Nangona kunjalo, iiMakethe zeHlabathi ziqhuba i-KYC kunye ne-AML.
Imirhumo yeeMarike zeHlabathi kunye neMida
Iimarike zeHlabathi zibiza iifizi ezimbini kwii-akhawunti zayo ezilawulwa yi-AI. Iakhawunti esemgangathweni inediphozithi encinci ye- $ 5,000. Inkampani ihlawulisa i-1% yemali yolawulo kunye ne-20% yentlawulo yokusebenza. Ke ngoko, ukuba uneakhawunti eyi- $ 5,000, inkampani iyakuthatha imali eyi- $ 50 yolawulo. Ukuba i-akhawunti izuza nge-20%, iifizi zenkampani ziya kuba yi- $ 200. Iakhawunti yeNkulumbuso yeGolide inedipozithi encinci ye- $ 25,000. Inkampani ihlawulisa i-1% yemali yolawulo kunye ne-10% yentlawulo yokusebenza.
Iimakethi zeHlabathi ayihlawulisi ezinye iifizi. Akukho mida inyukayo kwisixa semali onokuyityala.
INkxaso yabaThengi beMarket yeHlabathi
Iimakethi zehlabathi zivumela iindlela ezininzi zenkonzo yabathengi. Inika indlela yenkxaso ye-imeyile, apho ungathumela khona umyalezo we-imeyile. Inkampani ineenombolo zefowuni kumazwe angama-37, anokufumaneka Apha. Iimarike zeHlabathi zibhalise iiofisi eNorway, China, Switzerland nase-Iceland. Ineeofisi ezimele eManama nasePanama.
Indlela amaMarket eHlabathi athelekiswa ngayo nabanye abaRhwebi
Iimakethi zeHlabathi ayisiyo broker. Ngokungafaniyo nabanye abathengisi, iiMarike zeHlabathi aliboneleli ngeqonga lokuthengisa. I-Instrad, inkampani isebenza njengomthengisi ozisa i-HYCM, engumrhwebi omkhulu wamazwe aphesheya. Omnye umahluko phakathi kweMakethi yeHlabathi kunye nabanye abathengisi kukuba yidesika yokujongana. Oku kuthetha ukuba ithengisela ngokuthe ngqo abanye abathengi kunye nabathengi beziko. Omnye umahluko kukuba ithengisa izinto zexabiso ezinjengegolide nesilivere.
Isiphelo: Ngaba iMakethi yeHlabathi ikhuselekile?
Iimakethi zeHlabathi zikhuselekile xa ucinga ukuba isebenzisa iqonga lokurhweba kunye neenkonzo ezibonelelwa yi-HYCM, eyinkampani ethembekileyo yokurhweba engaphezu kweminyaka engamashumi amabini kolu shishino. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqonda izinto ezininzi. Okokuqala, kuncinci kakhulu, ngokubhekisele kulawulo nakwikomkhulu bayaziwa malunga nenkampani. Uninzi lwamabango kwiwebhusayithi yalo alunakuqinisekiswa. Okwesibini, inkampani ibanga ukuba ii-algorithms zayo ziqhuba kakuhle. Nangona kunjalo, le ntsebenzo ayinakuqinisekiswa kwaye akukho bungqina bokusebenza kwayo kwixa elizayo.
IsiNgesi. Inkampani inikezela ngeNguqulelo kaGoogle
Ukutshintshwa kweBhanki, iBitcoin, amakhadi